आफ्नै फुपुले रकम लिएर किन १५ वर्षिय ललितालाई दुनियाँको यौन प्यास मेटाउने साधना बनाईन..::kamananews
आफ्नै फुपुले रकम लिएर किन १५ वर्षिय ललितालाई दुनियाँको यौन प्यास मेटाउने साधना बनाईन..
पप्पु गुरुङ्ग-दोधारा चाँदनी । करिब १ वर्ष पछि १५ वर्षिय लिला सुनार (नाम परिवतर्तन गरिएको) भारतको दिल्ली मोतिनगरबाट माईती नेपाल कञ्चनपुरले हिजो उनलाई दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. ९ उद्धार गरेर ल्याएको छ् । लिलाले करिब १ महिना सम्म जून क्रुरता भोग्नु पर्‍यो त्यो संसारमै अकल्पनीय छ । यसमा कसैको दोष नभै आफ्नै दोष ठान्छन् । घरबाट फुपुको लहैलहैमा लागेर भारत नगएको भए यत्रो दु:ख पाउने थिएनन् । उनलाई आफ्नै फुपु सोना सुनारले मोटो रकम लिएर बिक्री गरेपछि उनलाई आफन्तको समेत बिश्वास उठेको उनि बताउछन् । ललितालाई शारीरिक सम्पर्क राख्न बाध्य पारियो ।
सानै उमेरमा शारिरीक सम्बन्ध राख्दा उनलाई निकै कष्ट भएको उनि बताछन् । एउटा सानो अध्यारो कोठामा बन्दमा बस्न बाध्य भए । उनी १ महिना सम्म राम्रो संग सुत्न समेत नदिएर दिनरात खरिदकर्ता किसन सुनारको यौन प्यास मेटाउन बाध्य पारियो । उनले
रातमा पनि राम्रो संग सुत्न पाएनन् । यसै सन्द्रर्भमा माईती नेपाल कञ्चनपुरले दिल्लीको मोतिनगरबाट उद्धार गरेर दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. ९ ललितालाई ल्याएपछि उनि संग पत्रकार पप्पु गुरुङ्गले उनकै घरमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :“आज घरबाट बाहिर निस्कन समेत सकिरहेको छैन् । सबैले मलाई हेरेको देख्दा डर जागेर आउछ् । सबैले मलाई हेर्दै कुरा गरेको देख्दा आफैलाई खिन्नता भएर आउछ् । मेरो फुपुहरु सिता र सोना सुनार हो । उहाँहरु २ फुपु दिल्ली बस्नु हुन्थ्यो । दुबै फुपुहरु बिवाह पछि उहाहरु दिल्लीमा बस्दै आउनुभएको छ् । एक वर्ष अघि मेरो फुपु सिता सुनार दिल्लीबाट दोधारा चाँदनी आउनुभएको थियो । उहाँले मलाई काम लागाईदिन्छु भनेर मलाई आफु संग लग्न थाल्नु भयो । मेरो घरमा मेरो बुवा सधै मदिरा सेवनमा दिन बित्ने गर्छ । आमा सानै छदा बितिसक्नु भयोघरमा बाजे, बज्यै हुनुहुन्छ् । घरमा नुन संग रोटी खाएर दिन बित्थ्यो । घरको आर्थिक समस्याले मैले स्कुल देख्न पनि पाईन् । मैले पनि आफ्नो घरको आर्थिक कठिनाईको बारेमा निकै सोचे । फुपु संग काम गर्न दिल्ली जाने सुर कसे । मेरो भबिष्य कता मोड्ला भन्ने सोच्नै सकिन् । पछि आएर जान ईच्छा पनि जाग्यो । त्यस साँझ खान खाई सकेपनि सुत्न ओछ्यानमा सुते । अबेर सम्म निन्द्रा लागेन् । त्यस रात मलाई खुशी र दुखको पिडा मनमा लिएर निकै लामो परिकल्पना गरे ।
एकातिर मैले कमाएको पैसाले मेरो घरको आर्थिक परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने खुशी थियो । मेरो भबिष्यले राम्रो मोड लिन्छ भन्नेमा म ढुक्क थिए । बिभिन्न परिकल्पनामा डुब्दै कति बेला सुतेछु पत्तोनै भएन् । साँझको भारतको खटिमा बसमा हामी बस्यौ । बसमा राती मलाई पट्कै निन्द्रा लागेन् । म एक्लै रमाई रहे । अलिक पैसा कमाएर घरको आवश्यकता पुरा गर्ने मेरो सपना आखा वरिपरी घुमिरह्यो । बिहान ८ बजे फुपु संग दिल्लीको अन्तराष्ट्रिय बस अड्डा पुग्यौं । कहिले नदेखेको त्यत्रो शहर देख्दा सपनाको संसारमा गए जस्तो लाग्यो मलाई । केहि घण्टामा हामी ट्याक्सी चढेर मोतिनगर पुग्यौं । एक साताको फुपुको घरमा बसाई रह्यो । पुसई देशी मदिरा पसलमा काम गर्नुृ हुन्थ्यो । फुपु कोठीमा झाडु, पोता लगाउने गर्नुहुन्थ्यो । म फुपुको २ छोरा र २ छोरी संग घरमा बस्थे ।
दिनचार्य राम्रै बित्दै गयो । मलाई मेरी फुपु सिताले नौकरीको लागी कुराकानी चलाउदै हुनुहुन्थ्यो । एक दिन मेरो अर्का फुपु सोनाको फोन आयो । मलाई केही दिनको लागी सोना फुपुले आफ्नो घरमा बोलाउनु भयो । उहाँको घर म बसेको सिता फुपुको घर देखि करिब ३ किलोमिटर थियो । सिता फुपुको छोरी धनसरी र मलाई केही दिनको लागी सोना फुपुको घर बस्न पठाउनु भयो । हामी २ जना सोना फुपुको घर पुग्यौ । उसै रात एक २० उमेर भएको किसन सुनार भन्ने मान्छे हामी बसेको सोना फुपुको घर आयो । मलाई र किसनलाई एकै कोठामा राखे । मैले किसन संग बस्न मानेन् । सोना फुपुले गाली गनुृ भयो । किसनले मेरो शरिरमा हात हाल्दै कुरा गर्न खोज्यो । मैलै उसको हात हटाउन प्रयास गर्दै गरे । उसले आफु संग बिवाह गर्न भन्यो । मैले मानेन् । उ रिसाएर फुपुलाई बोलायो ।
अर्का कोठामा रहेका मेरी सोना फुपुले आएर “तँ मान्दैनस्” भन्दै मलाई कुटपिट गनुृ भयो । म रोई मात्र रहे । अब मलाई डर लाग्न थाल्यो । मलाई मोटो रकम लिएर बेचेको कुरा मैले उनको कुराकानीबाट बुझ्न थाले । “यस्ले मान्दैन भने मेरो पैसा फिर्ता चाहियो” भन्दै किसन बाहिरियो । मलाई मेरो सोना फुपुले निकै सम्झाए । म मान्दै मानिन् । त्यो दिन मेरो रोएर बित्यो । म, मेरी सिता फुपुको घर जान्छु भने, तर मलाई घर बाहिर निस्कन समेत दिईएनन् । अर्को साँझ किसन र एक जना कालो कालो मान्छे मोटरसाईकल लिएर आयो । किसन र उसै संग आएको अर्को ब्यक्तीले जबरजस्ती मलाई मोटर साईकलमा हाल्यो । मेरी सोना फुपु हेरेर हासिरहे । म निकै चिच्याए । त्यत्ती बेला रातीको ९ बजेको हुनु पर्छ ।
मेरो आवाज सुन्ने कोही पनि भएनन् । मलाई करिब आधा घण्टाको बाटो हुदै एक घरमा पुगायो । मलाई एक कोठामा थुनेर किसन संग आएको अर्को मान्छे । घर जान्छु भन्दै गयो । त्यस राती मलाई किसनले बारम्बार यौन शोषण गर्‍यो । मेरो उमेर सानै भएको कारण उसको बढेमानको जिउ सकिन । दिन दिनैको किसनको यौन प्यास मेटाउन म, बाध्य बन्दै गए । उसले दिनभरी रातभरी मलाई कोठामा थुनेर कुटपिट गर्न बाहेक केही गरेन् । मेरो १ महिना अन्ध्यारो कोठामा बित्यो । समयमा खान पाईन, समयमा सुत्न पाईन् । दिनरातको कुटपिट र यौन शोषणले मेरो शरिरै थाकेर आउथ्यो ।
मेरो सानो उमेर भएको ले उसको बढेमानको जिउ मलाई धान्न सकिन । एक दिन मेरो सिता फुपुले थाहा पाएर उनिहरु बिरुद्ध भारतिय प्रहरीमा मुद्धा दर्ता गर्नु भएछ् । अचानक भारतिय प्रहरी र मेरी सिता फुपु आएर मलाई कोठाबाट लिन आउनु भयो । मैले मेरी फुपु भेट्ने बित्तिकै अंगालोमा बाधेर रोए । भारतिय प्रहरीले फुपु सोना सुनार, किसन सुनार गरि ४ जनालाई पक्राउ गर्‍यो, भने मलाई भारतमा रहेको निर्मल निवास भन्ने एक संस्थाले माईती नेपाल मार्फत कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी पुगायो ।”my blog बाट साभार
अपराध बाट अन्य
काठमाडौंमै १५ वर्षीया किशोरीलाई एक सातासम्म बन्धक बनाएर सामूहिक बलात्कार गर्ने यी पापी
काठमाडौं– १५ वर्षीया किशोरीलाई एक सातासम्म बन्धक बनाएर सामूहिक बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौंमा ५ जना व्यक्तिले उनीमाथि बलात्कार गरेका हुन्। फागुन १७ गते बल्खुबाट कीर्तिपुर जान बा ४ ख ३८५१ नम्बरको बसमा...
किन बढ्दैछ बलात्कार ?कसरी रोक्न सकिन्छ त
समाजमा दिनप्रतिदिन बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । बलात्कारीलाई यो वा त्यो सजाय दिनुपर्छ भन्ने आवाज त उठेको छ तर बलात्कार न्यूनीकरणका उपाय के हुन् भनेर खासै चिन्ता प्रकट भएको पाइँदैन । समस्याको चुरो पहिल्याइएन...
यस्ता कुपुत्र, जसले आफ्नै पिताको आफैंले रेटे घाँटी , त्यसपछि फेविकोल लगाएर जोड्न थाले
भैरहवा। एक छोराले आफ्नै पिताको घाँटी पहिले आफैंले काटे त्यसपछि फेविकोल लगाएर जोड्ने प्रयास गरेको आश्चर्यजनक घटना सार्वजनिक भएको छ । ती छोलाले पहिले आफ्ना पिताको गला धारिलो हतियारले काटे त्यसपछि फेविकोल लगाएर जोड्ने...